Iprojekthi-SiChuan XiangYue Power Line Components Co., Ltd.
I-Mongolia - i-20meters i-4 legged telecommunication tower 2022.03
Igama leProjekthi:Mongila - 20meters 4 inqaba yonxibelelwano ngemilenze enemilenze emi-4
UmThengi usifumene nge-Alibaba ngoDisemba ka-2021 ukuze sibuze imilenze emi-4d self inkxaso 20meters telecom tower.
Itotali yeenqaba zentsimbi ezingama-20 ezinobude obuziimitha ezingama-20 ziyilwe, ziveliswe kwaye zilungiswe ngokwemizobo yomthengi, kwaye zipakishwe kwaye zithunyelwe ngokweemfuno zomthengi.
Igama leProjekthi: IProjekthi ye-Nicaragua ye-33KV yokuThunyelwa koMbane ye-Tower 30M Height
Emva kweenyanga ezimbini zemizamo engapheliyo yomthengisi, ekugqibeleni safikelela kwintsebenziswano kunye neNicaragua ukubonelela nge-25m ephezulu ye-33kV inqaba yamandla kunye nokukhuthaza ukwakhiwa kweziseko zombane zaseNicaragua.
EMyanmar - 11kV Transmission Line Tower 2021.10
Igama leProjekthi: eMyanmar-11kv Transmission Line Tower 2021.10
EMyanmar uMnumzana Yao ufumana i-XYTOWER esuka e-Alibaba,Emva kweenzame ezingapheliyo zentengiso ye-Darcy, ekugqibeleni safikelela kwintsebenziswano kunye neMyanmar ukubonelela nge-voltage ephantsi yombane we-11kV yomzila wokuhambisa umbane kunye nokukhuthaza ukwakhiwa kweziseko zombane zaseMyanma.
Idilesi: Umhla waseMyanmar: 10-2021
EMyanmar - 11kV iNqaba yoThutho lwaMandla oMbane 2021.06
Igama leProjekthi: IProjekthi yoMbane yeMyanmar 11KV yeTower 27M Height
IMyanmar Padauk Co., Ltd isifumene nge-Alibaba.com ngo-Agasti, ka-2020 ukuze sithenge iiseti ezisi-8 zeenqaba zokuwela umlambo.
Emva kweentsuku ezili-10 zonxibelelwano, bathatha isigqibo sokwamkela umzobo wethu esiwuncomayo ngokweenkcukacha zabo kunye neemfuno zabo, emva koko bathumela iPO kuthi.
Idilesi: Umhla waseMyanmar: 02-06-2021
IMongolia - 15meter Telecom Tower 2021.06
Umnumzana Aibolat usifumene nge-Alibaba ngo-Epreli ka-2021 ukuze sibuze i-4 leg 15meter telecom tower.
Ngenxa yalo bhubhani, iprojekthi yabo isemva kweenyanga eziliqela.Ngoko ke, oku kuthenga kwakungxamiseke gqitha, kufuna ukuba sivelise kwisithuba senyanga enyekwaye uyizise e-Eren hot, umda ophakathi kweMongolia neTshayina.
Kwiintsuku ezimbalwa emva konxibelelwano lokuqala, wabeka umyalelo kunye nathi, kwaye sagqiba imveliso kwaye siyihambisa ngexesha.Ifoto ithunyelwe ngumthengi emva kokuba iprojekthi igqityiwe Idilesi:Mongolia Umhla:23-06-2021
NgoMatshi ka-2020. UMnu H uqhagamshelane neeTowers ze-XY esebenzisa i-ALIBABA yeenqaba zokuqhuba igalufa. Inqaba nganye inodonga olunobunzima obuyi-100 kg olusebenza ngokuthe nkqo kunye nenethi yesilingi enobunzima obungama-30 kg phezu kwenqaba nganye kwii-engile zasekunene ukuya kwinqaba elandelayo. amaxesha uthethathethwano noMnu H malunga neenkcukacha kumthamo othe nkqo nothe tye womthwalo kunye neenkcukacha zamaxabiso.
Ngokungqinelana nolwazi lukaMnu. H. XY yenzelwe inqaba enemilenze emithathu kaMnu. H. Inqaba nganye inobunzima obumalunga neetoni ezi-5, malunga neetoni ezingama-200 ngokupheleleyo.
Igama leProjekthi: Laos-10KV Izixhobo zentsimbi 2021.01
Inkampani yethu ibonelela uMthengi weLaos ngePower Transmission Tower Iron Accessories, Ubunzima buBonke: iitoni ezingama-540. Umyalelo usayinwe ngoJanuwari 2021, kwaye ixesha loMveliso ziintsuku ezingama-22.Ifakwe kwiNkqubo yesiqhelo ekuqaleni kuka-Epreli ka-2021.
Idilesi: LaosUmhla: 01-10-2021
I-Iraq- 132kV Amandla oMbane Tower 2020.10
Igama leProjekthi: Iraq 132kVINqaba yoThutho lwaMandla
Ngokwemizobo yoyilo ebonelelwa ngabathengi, sayihlalutya, kwaye emva koko saqala ukuvelisa kunye nokusebenza.Emva kokucutshungulwa, senze uvavanyo lwendibano, kwaye savavanya ukuba izixhobo ziyayifezekisa na imigangatho, eyayibanelisa ngamxhelo mnye kubathengi.
iSri Lanka-iSakhiwo soMbane woMbane 2020.08
Igama leProjekthi:iSri Lanka-iProjekthi yoLwakhiwo lwesiKhululo soMbane
Siba neNtsebenziswano kunye nabaThengi baseSri Lanka kule projekthi, kunye nobunzima obupheleleyo beetoni ze-130, uMyalelo usayinwe ngo-Matshi 2021, kunye nexesha leMveliso yiNtsuku ze-40.Ifakwe kwiNkqubo yesiqhelo ekuqaleni kuka-Epreli ka-2021.
Idilesi:Sri Lanka Umhla:23-08-2020
Surinam-Izincedisi zentsimbi 2020.03
Igama leProjekthi:I-Surinam-Izincedisi zentsimbi eziHlala ngeentonga 2020.03
Siba neNtsebenziswano kunye nabaThengi baseSurinam kwizixhobo zentsimbi ezinikezelayo, ezinobunzima obupheleleyo beetoni ezingama-50, uMyalelo usayinwe ngoFebruwari 2020, kwaye ixesha leMveliso yiNtsuku ezingama-30.Ifakwe kwiNkqubo yesiqhelo ekuqaleni kukaFebruwari 2020.
IMongolia –110kV Galvanized Steel Tower 2019.12
Indawo ngokubanzi: iMongolia, ulwakhiwo olutsha lwe-110k iilophu eziphindwe kabini kwicala lomsebenzisiMongoliya iprojekthi.ucingo:JL/G1A-240/30.Ucingo olusezantsi: OPGW-24B1-80.Ubude obupheleleyo bomgca yi-11KM, Ubuninzi obupheleleyo: i-angle steel tower yi-35 seti.Ubunzima bubonke: 483 iitoni.Umyalelo usayinwe ngoSeptemba 2019, kwaye ixesha lokuvelisa iintsuku ezingama-22.Isetyenziswe ngokwesiqhelo ekuqaleni kukaMatshi ka-2020.